Izindaba - Umehluko Phakathi Kosilika NoMalibhele Usilika
Ngemuva kokugqoka usilika iminyaka eminingi kangaka, ngabe uyaqonda ngempela usilika?
Njalo lapho uthenga isembatho noma izimpahla zasendlini, umthengisi uzokutshela ukuthi le yindwangu kasilika, kepha kungani le ndwangu kanokusho iyinani elihlukile? Uyini umehluko phakathi kukasilika nosilika?
Inkinga encane: uhluke kanjani usilika kusilika?
Eqinisweni, usilika unengxenye kasilika, umehluko oqondakala kalula. Usilika uqukethe usilika, kepha kukhona nezinhlobo zikasilika. Uma kunzima ukuhlukanisa, zingahlukaniswa kuphela nengxenye yefayibha.
Usilika empeleni usilika
Engutsheni oxhumana nayo umphakathi, kuvame ukuthi le ngubo yenziwe ngendwangu kasilika, kepha lapho kuhlolwa ukwakheka kwesembatho, usilika = 100% kasilika kamalibhele. Lokho kusho ukuthi, ungakanani usilika oqukethwe kusilika.
Vele, ngaphezu kwezakhi zikasilika, ziningi ezinye izindwangu ezihlanganisiwe. Siyazi ukuthi kunezinhlobo eziningi zikasilika, ezifana nosilika kamalibhele, uShuanggong kamalibhele kasilika, usilika ocindezelweyo, nosilika wasezulwini. . Amasilika ahlukene anezintengo ezehlukene futhi anezici ezihlukile, futhi izindwangu zikasilika ezinosilika ezingeziwe zinokukhazimula okuhlukile “kosilika”, umuzwa obushelelezi, ukhululekile ukugqoka, okunethezeka nenhle.
Isithako esiyinhloko sikasilika singenye yezintambo zezilwane, futhi inqubo yokweluka endala kakhulu kasilika wethu ovamile isebenzisa usilika omningi kamalibhele, owaziwa nangokuthi "usilika wangempela".
Usilika ngokuvamile ungabhekisa kusilika, kepha awuzihlanganisi ezinye izintambo zamakhemikhali nezindwangu zikasilika ezinezici ezahlukahlukene zefayibha zokuhlanganisa.
Ngemuva kokuthuthuka okuqhubekayo kobuciko bokweluka, abantu bangeze izithako zendwangu ezahlukahlukene, ukuze ukuthungwa nokwakheka kukasilika kuhluke kakhulu, futhi indwangu uqobo olubonakalayo ngeso lenyama nayo inezindlela ezahlukahlukene zokwethula.